Bukaan madow ah oo lagu xirey tuhun ah in uu soo xaday qalabkii uu neefta ka qaadanayay - BBC News Somali
Booliska dalka Mareykanka ayaa baaraya dhacdo qabsatay bukaan madow ah oo lagu xiray gobolka Illinois xilli uu ku sugnaa agagaarka isbitaal lagu daweynayay xilli uu ku rakibnaa qalab caafimaad oo neefsiga ka caawinayay iyo faleebo gacanta uga xirneyd.
Bukaanka oo lagu magacaabo Shaquille Dukes waxaa uu sheegay inuu socod ku marayay agagaarka Isbitaalka isla markaasna uu raacayay talooyin uu usoo jeediyay dhakhtarkiisa.
Waxaa markiiba gacanta ku dhigay askari dhar cad ah, waxaana lagu eedeeyay inuu xadi rabay qalabkii caafimaad ee uu neefta ka qaadanayay.
Dukes waxaa uu hadda dacwad ka gudbiyay askarigaas oo uu ku eedeeyay inuu midab takoor kula kacay.
Booliska waxay sheegeen inay sameeyeen tallaabadii ugu habooneyd balse ay bilaabeen baaritaanno madaxbanaan oo lagu ogonaayo sababta ka dambeysay xiritaanka bukaanka.
Booliska Mareykanka oo xiray nin falal dil ah gaystay
Isbitaalka uu jiifay bukaankan dhibaatadaas loo geystay kama uusan hadlin dhacdadaas.
Waxay arrintani dhacday 9-kii bishii June balse waxaa hadda si weyn u baahisay warbaahinta Mareykanka.
Muxuu yiri Bukaanka?
Dukes oo 24 jir ah waxaa uu kasoo jeeda magaalada Chicago, waxaa uu ka dhawaajiyay in isbitaalka la geeyay xilli uu la xannuunsanaa oof-wareenka.
Waxaa uu bartiisa Facebook kusoo qoray "Kaddib markii aan helay talada dhakhtarka oo ah in aan bannaanka ula baxo qalabka caafimaadka, waxaa I istaajiyay sarkaal boolis ah oo cunsuri ah, kaas oo ku anddacooday in aan xadi xadi rabo qalabka"
Waxaa uu sheegay in markii dambe la xiray isagoo lagu eedeynayo isku day xatooyo ah.
Askari Soomaali ah oo ka tirsanaa booliska Mareykanka oo loo xiray dil
"Booliska waxay iga qaateen qalabkii neefsiga iga caawinayay, waxay ii qaaden xabsiga, waxaan bilaabay in aan suuxo maadama uu xannuunka oof wareenka dhexda igu qabtay, muddo afar daqiiqo ah ayaa ka codsanayay inay i siiyaan qalabka" ayuu yiri Dukes.
Maxay yiraahdeen booliska?
Booliska waxay sheegeen in qalabka ay ka qaadeen bukaanka codsi ugu yimid isbitaalka dartiis.
Waxay sidoo kale sheegeen in muuqaal la duubiyay uu muujinayo in booliska ay si wanaagsan ula dhaqmeen bukaanka markii ay xirayeen isla markaasna wax dhibaata ah aanan loo geysan.
Saraakiisha waxay warbaahinta ABC u sheegeen in bukaanka aanan la siin ruqsad uu isbitaalka kaga bixi karo isagoo ay ku rakiban yihiin qalabka neefsiga ka caawiyo bukaanada.
Dukes ayaa lagu wadaa inuu maxkamad kasoo muuqdo bisha soo socota, sida ay ku warrantay warbaahinta Mareykanka.